झन् रहस्यमय बन्दै टिकापुर घटना : त्यो दिन दिदिभाई हिड्दै गरेको प्रत्येक्ष्य देख्ने छिमेकीले बताई यस्तो अनौठो कुरा – Kavrepati
Home / समाचार / झन् रहस्यमय बन्दै टिकापुर घटना : त्यो दिन दिदिभाई हिड्दै गरेको प्रत्येक्ष्य देख्ने छिमेकीले बताई यस्तो अनौठो कुरा
झन् रहस्यमय बन्दै टिकापुर घटना : त्यो दिन दिदिभाई हिड्दै गरेको प्रत्येक्ष्य देख्ने छिमेकीले बताई यस्तो अनौठो कुरा
admin July 9, 2021	समाचार Leaveacomment 137 Views
धनगढी । कैलालीको टीकापुरमा हराएको तीन दिन पछि मृ त फेला परेका साढे तीन वर्षीय बालकको घटनामा संग्लनको आरोपमा दुई किशोरी पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले बुधबार मृ त फेला परेका साढे ३ वर्षीय विवेक विष्टको ह’ त्या आरोपमा दुई किशोरीलाई पक्राउ गरेको हो ।
दिदीसंग जामुन खान गएर फर्किए पछि नजिकैको आफन्तको घरमा जान भन्दै हिडेका बालक अचानक हराएका थिए । उनी तिन दिन पछि नजिकैको नालामा मृ त फेला परेको हुन् ।
बालक ह’ त्या आरोपमा १५ वर्षीया किशोरी ती किशोरीकी १४ वर्षकी साथीलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ। बालकलाई उनीहरुले आफूसँगै जामुन खान लिएर गएका जनाइएको छ । उनीहरुले बालकलाई कुलोको किनारबाट धकेलेर ह त्या ग रे को अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
खुट्टाको चाँदीका बाला निकालेर बालकलाई कुलोमा फालेको किशोरीले स्वीकारेको बताइएको छ । प्रहरीका अनुसार ति किशोरीले पारिवारिक रिसिबीका कारण घटनाको योजना बनाएको पनि प्रहरीसंग वयानमा भनेकी छन् । त्यो दिन दिदिभाईलाई संगै देख्ने छिमेकी ले यसो भन्छन हेर्नुहोस् तलको भिडियोमा –
Previous अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी निशाले किन यस्तो गरिन् ?
Next नायिका कुँवरले आफ्नै अपार्टमेन्टमा देहत्याग गरेपछि घटनास्थलमा जे देखियो …. (भिडियो सहित)